साहित्य Archives - Samachar Post Dainik
जसमा थियो: “म तिमीलाई छाडेर जान सक्दिन मात्रै भनेको भए मैले मर्नुपर्ने थिएन” एउटी चरीको कथा
२० जेष्ठ २०७८, बिहीबार ०१:०१
एउटा जंगलको रुखमा गुड बनाएर एक जोडी चरा बसेका थिए । यो जोडी एक अर्का लाई अति माया गर्थे । चरी असाध्यै राम्री थिई । सँगै बसेर यो जोडि खुब प्रेमालाप गर्थे । एक दिन प्रेमा`लापकै सिलसिलामा चराले चरीलाई भन्छ : चरा : तिमी असाध्यै राम्री छौं । म बुढो हुन लागेँ, तिमीले कतै मलाई छाडेर त जान्नौ नी रानी ? चरी : म कतै जान खोजे.....
मायाले पुलपुलिएको खाडीको ‘तोरी लाउरे
९ जेष्ठ २०७८, आईतवार ०९:२४
भोला थापा क्षेत्री / नेपाल, हाल कतार वरपर घनघोर जङ्गल छ । हरेक रात बाघ हिँड्छ । कहिलेकाहीँ आक्रमण पनि गर्छ । बाँदर र भालुले मकै सत्यनास पार्छ । दिउँसै समेत बस्न डर लाग्ने त्यो ठाउँ नजिकै एउटा सानो घर छ । करिब २/३ सय मिटरको दूरीमा रहेका अन्य घरहरु बोलाउँदा झट्टै नसुनिने कोल्टे परेको ठाउँमा छन् । एउटा गोठजस्तो.....
मैले बुझ्न नसकेको तिम्रो मन
१३ कार्तिक २०७७, बिहीबार ०९:३५
खै कहाँबाट सुरु गरौं गन्तव्यविहीन जिन्दगीका कथा । जब तिमी मेरो स’म्पर्कमा आयौ, तब मेरो ओइलिएको जिन्दगी फेरि पालुवा पलाउन लागेको मात्रै के थियो । तिमी नै मेरो बाँच्ने एक मात्रै आधार भयौ । कति रमाइला थिए, ती दिनहरू, अनि ती पलहरू। कहिले काहिँ सँगैछौ जस्तो लाग्छ । तर, होसमा आएपछि आफूलाई एक्लो पाउँछु । अपसोच त.....
२ कार्तिक २०७७, आईतवार ०७:०३
लेखक, युवा साहित्यकार दियु पौडेलको मनछुने कथा , “पापी लोग्ने” खण्ड “ख” को भाग एक देखि भाग चार सम्म अवस्य पुरा पढेर सबैले सेयर गर्नुनबिर्सनु होला ‘ सुदुर समाज दियु पौडेलको “मनछुने कथा , “पापी लोग्ने”….. हेर्दा हेर्दै साॅझ परिसकेको छ !विजुलीका वत्तिहरु धिपिधिपि वलिरहेकाछन् ! सुनसान सडक छ! म भित्र धेरै आवाजहरु.....